Mai Chibwe VekwaZimuto: Murume/mukadzi anonaka
Kuti mukadzi wako afunge kuti murume wake anonaka murume uyu anenge ari murume rudzii?
Hazvinetsi kuti murume anzi anonaka.Murume anofanira kuva nezvinhu zvishomashoma muunhu hwake. Anofanira kuva
Norudo pamukadzi wake
Nguva nomukadzi wake
Kugarounzira mukadzi zvinhu
Kutenda mukadzi kana aita zvinhu zvakanaka.
Kudzidza kusagumbura mukadzi wake
Kugeza kana wapiwa mvura yokugeza. wokweshawo mazino
Kusauya kumba wakadhakwa.
Kugaroitisa mukadzi manyawi nokumukudza zvikuru kana pane vanhu.
Kuterera mukadzi kana achitaura.
Pakurhojana murume anonaka murume anotora ngva pakutamba akamirira kupinza
Kana tichiti kutamba tinoreva kutamba nomukadzi wako musina kupfeka, Hwisisa kuti pamberi handipo mukadzi wako. Mukadzi wako ane pamberi asi ane muviri wese unoda kubatwabatwa kupurudzigwa, kupiwa TONGUE BATH, kutariswa, kusvetwa, kusvinyangwa nemaoko, kukiswa, kupinzwa zvigumwe, etc. Muviri wese ndiwo mukadzi wako. Ona kuti zvese zvaari zvabatwabatwa.
Zvadaro ipawo mukadzi wako chombo atambe nacho, minyatso yako aiswete, magaro ako amapurudzirewo sezvaunoita ago. Ndiko kutamba kwacho ikoko kunokonzera mukadzi wako kunyorova zasi uye kuva nezemo rakawanda.
Kana murume azopinza achida kuva munhu anonaka, anotora nguva asati adiridzira mukadzi wake. Tora nguva uchiti ukakoira koira, wombomira mukadzi iota sowotonhora achida kukoigwa iwe uchimuita zvishoma, wombowedzera futi, woderedza futi, uchingodaro kusvika wazomuita zvokumupfidzisa wobva wamudiridzira hako. Whisisa kuti kuva nechombo mukati kunofadza saka ita nguva urimukati memukadzi wako, kwete kuita senhunzi kungoti miniti isina kupera watokotsira uchifuna kuti wapedza basa. Bodo. ita nguva.
Kana murume ari munhu akachena pamoyo, ari munhu ane rudo, asingakasiriri mukadzi wake, munhu anonaka chete. Isu vakadzi hatisi vanhu vanonetsa kugutsa. Ndizvo muchiona kusina mahure echirume akawanda anobhadharisa. Ingari yokuti hakuna MARKET yacho. Isu vakadzi tinenge takaguta izvozvo zvishoma zvatapiwa kumba. Ukaona mukadzi wemunhu ohura, pane nyaya dzakawanda ipapo. Hatimbonetsi kunakira kana. Taridza rudo uye tora nguva pakurhojana, chete chete.
Chiona mesomeso anoitwa nevarume nokusagutsikana nezvaanazvo kumba. Murume akangofanana nenhunzi panyaya dzerhoji. Nhunzi unomhara panyama, yodya yoguta, yoona imwe nyama yoendapo futi yadya futi. Hazvina basa kuti nyama iri nani ndeipi pambiri idzidzo.
Kwahi naimwe shamwari anobva kuZambia. "Murume akashata pameso kana kuti chifupifupi ndiye anonaka nokuti anoziva kuti akatombopiwa chanzi aita rombo rakanaka musi uyu saka anobva aita nomoyo wose nokuti kukangopera nguva asina kuriwana futi, Asi kana wamufungira kumuda, tora nguva yakawanda usati wavata naye kuti azive kuti chanzi ishoma."
Mahwa here varume? Ukangodzidza kunonoka kudiridzira mukadzi wako, uye uchimupa rhoji inorudo mukati, watova munhu anonaka. Mukadzi anonakigwa haapopoti, haafoyi, anopa rukudzo kumurume wake. Saka ukaona une dambudziko pane izvi mumba mako, ziva kuti mukadzi haasi kuguta. Usamubvunza chinhu, ingomurongera womupa Rudo, nokunonoka, ugozotiudzawo kuti chii chaitika. Hwisisawo kuti urume tinohuda chose asi nonoka kuuya nahwo. Chiendai munoita
Hino Kune vamwe varume vasina basa nokuti anonaka here kana kwete. Unonhohwa achitaura neshamwari dzake achishandisa mashoko eganyabvu nehasha chete.
1 Chinhu ndinorova
2 Chinhu ndinokwapura
3 Chinhu ndino baya
4 Mukadzi ndinomusurisa
5 Ndakamutadzisa kufamba
7 Hure riya ndakaritundira katatu
Zvese zvinotaugwa ukanatsoterera unohwisisa kuti FOCUS yake yese iri paari iye. Zvokuti mukadzi anakugwawo here haanei nazvo. Hazvitomopindi mfungwa dzake. Ndiye murume anozoti papera makore mana mukadzi wake tanga kuramba kuvata naye iye opopotera mukadzi kuita sokuti mukadzi ndiye ane mhosva. Anoona sokuti kupinza nokutunda ndizvo zvinonakira mukadzi.
Varume itai fungwa yokuva vanhu vanonaka. Mukore uno kuzhe uko kwashata sana nakira mukadzi wako iye akunakirewo murudo. Pota uchibvunza kuti chii chaungaita awedzere kunakigwa. Chii chaari kuda nhasi?
Kuti murume wako afunge kuti mukadzi wake anonaka mukadzi anenge ari mukadzi akaita sei? Iyi nyaya tinokwanisa kunyora mabhuku pairi. Murume umwe noumwe anoroora mukadzi waanofunga kuti mukadzi kwaye pamaonere ake. Kazhinji murume anokombeya mukadzi wake namai vake pazvinhu zvakawanda zvakaita sokugona kubika kana kuchengeta imba yakachena. Kana fungwa yake ikati mukadzi waasarudza ndiye kwaye, mukadzi wacho akakasira kuzvibata akaita munhu anohwisisa zvimwe zvinyaya zvidiki, murume anokwanisa kukwidza mukadzi wake kumuendesa pamusorosoro pevamwe vakadzi vemuraini.
Kuzoti afunge kuti mukadzi wake anonaka mukadzi anenge akaita sei? Kunaka kwemukadzi kunaka pakurhojana. Ngatitangei nokubvumirana kuti varume vakawanda vanofunga kuti hure/ small house rinonaka. Varume vakawanda vakaona shamwari yake ine hure raanogaroona, anokwanisa kumutsiura hake asi anoita majerasi chaiwo pamoyo pake. Varume vanhu vanonetsa kuhwisisa.
Kazhinji murume akatanga nyaya yemahure, anoramba achiita zvokuti chero mukada kumupopotera, kumugarisa dare, kumuramba, haaregi. Anozoti pepu nyaya yake yatokanganisika, upenyu hwake nehwemhuri yake hwatoparara iye ava rombe chairo nengari yokushaya MANAGEMENT yechombo. pakuzosiya hure riya anenge atowana rimwe raanoti rinonaka kupfuura rokutanga.
Pane hazvanzi yangu akaitisa chimwe chimuhure mimba chichitoziva kuti ane mukadzi nevana. Mhuri yakagara dare yagarazve dare asi hapana chakabuda ipapo. Murume mukuru ane madhigirii matatu kuuya kudare kuudza vakuru kuti muhure uyu ari kuramba kurambwa saka hapana zvaanogona kuita. Vanhu vobvunza kuti unomuda here iye anoti kwete asi kukangosviba okwira mota onanga kuhure. Ipapo haana shuwa kuti mimba ndeyake. Nokuti anoziva kuti muhure anohura nevamwe varume.
Ini ndakazoti Bhudhi taurai chokwadi munodirei hure iri imi mune mukadzi, zvikahi zvinonetsa kutsanangurira munhukadzi kuti chii chinoitika kana ndina Furorenzi. Kwahi fungwa inoti usadai asi kuti ndirege zvinonetsa. Munhu anonaka. Ndikati ko maiguru? Kwahi zvakasiyana. Ipapo maiguru munhu wakafunda chose akaita munhu ane basa riri pamusoro anoremekedzwa nevakawanda. Chimuhure chakasvika form 2 asi rhoji chinoihwisisa chose kusvika pakutenderedza fungwa dzavarume vakuru vakawanda.
Chii chaanoita muhure uyu chisingaitwi navakadzi vemumba? Madhirezi anodhura haana. Imba huru huru haana. Mota haana. Murume wake wemumba haana. Kudzidza haana. Asi varume vanoita muraini pamba pake vachimupa mari vachibvuma kuti mimba yaanayo ndeyavo. Chii chaanoita chinonzi chinonaka uye chinonaka zvakadii?
Mukadzi wemumba zvibvunze kuti kana ndichida kuzvikombeya navanhu vanohi mahure (munhu anovata nevarume vevanhu vakawanda achipiwa mari kana kungotengegwa zvinhu) chii chandingaita pamurume wangu?
Vamwe vanoti kunaka chikapa. Chibvunza mutauri wacho kuti chikapa chii unohwa oti chikapa kunakira murume. Ipapo unobva waona kuti munhu haazivi zvaari kutaura. Ukabvunza varume kuti chavanoti kunaka chii pamukadzi unohwa nyaya dzakawanda. Ndakahwa umwe oti akambotorana nechimwe chimusikana chakashata zvokuti pameso asi chainaka zvokuti. Ndikati chaunoti kunaka chii, kwahi aah ainaka musi iwoyo. Ainaka sei? Kwahi, ha mhani maiguru munoziva kunaka imi? Ndikati bodo handizivi, nditsanangurire kuti mukadzi anonaka munhu akaita sei uye chii chaanoita chinonaka? Inyaya inonetsa nokuti varume havawirirani pakuona kwavo.
Kana ndichitsvaka SUMMARY ndinoti kunaka kwemukadzi iATTITUDE yake kumurume wake nehama dzake, nekushamwari dzake. Apa panonetsa kukwikwidzana nehure nokuti hure hariudzwi hama neshamwari. Kana murume ane hure haana nguva yokutaura nyaya dzomumba. Anovinga nyaya yerhoji chete opiwa rhoji yake oenda kumba kwake kune mukadzi wemumba. Saka tasarigwa nokuongorora nyaya yerhoji chete.
Parhoji apa haisi nyaya yokungovhura makumbo murume opinza chombo iota zvaanoda zvatopera. Ita manager werhoji mumba. Imbofunga kuti varume vanodzoka kumba vachibva kumahure vangani? Chii chiri kukanganiswa nevakadzi vomumba. Basa rako kana uri MANAGER wechimwe chinhu kuziva zvinhu zvese panyaya yacho. Kana une chausingazivi enda unodzidza kuti chinoitwa sei. Atiitude yako pamurume wako inokwanisa kukukanganisira upenyu hwako.
Attitude ndeyokuti ndiwe muridzi wekurhoja kwese kunodiwa nomurume wako. Hakufaniri kuva noumwe munhu. Woita munhu anohwisisa kuti ndiwe mai mumba, ndiwe mukadzi mumba, ndiwe hure remurume muBedroom, ndiwe muchengeti wemba, ndiwe munhu asinganeti. Ndiwe munhu asinganyimi murume, ndiwe munhu anozvichengetedza pautano.
Maonero ako ndiwo anotanga kunakira murume. Kuzosvika parhoji apa watozvipira kuita chero chakadii hacho chaanoda, uye kubvunza zvese zvaanoda. Pahure murume anobhadhara saka chero chaada rinomupa. Isuwo ngatipe varume vedu. Kana ukaona achingoda zvokupinza okoira ovata, muudze iwe manager kuti akaramba achidai achabhowekana nazvo “Familiarity breeds Contempt.” Mugarise pasi umubvunze zvese zvaanoita FANTASY nazvo mufungwa dzake. Kana usingazvigoni dzidzai mese kuzviita.
Kana uchitambisa chiuno parhoji, tambisa uchiratidza kuti moyo wako uri pakugutsa murume. Garotaurira murume kuti anonaka. Garonemera murume, Kana murume akaita chinhu chinofadza mubhadhare nokumupa muviri wako afarewo. Muchiuno chemukadzi mune simba rakawanda rinokwanisa kugadzira mwana, kufadza murume, kuuraya murume nezvigwere, kuumba upenyu hwemhuri, kufungisa murume kuti akagona pakusarudza, kushungurudza murume. Iwe sarudza chaunoda kuitira murume wako muupenyu hwenyu.
Kana ukaita murume anoshusha anogara asina mufaro, asingaratidzi kuti ane mukadzi, unokwanisa kushushikana pamoyo.Ona kuti upenyu hwako haudzikiswi pasi nomurume pazvisina maturo. Ramba wakazvipira kukwidza upenyu hwake nokumuita munhu anodadisa.
Ndinohwa vamwe vachifunga kuti kana achipinda church nomurume wake zvinoreva kuti vane STABILITY yakawanda kupfuura vasingapindi. Kurhizena kwakadai kushaya njere. Muchurch imomo munotova nevakadzi vanoda murume wako chose. Kungoshaiwa kuti vomubata sei. Unofanira kugara uri pamusoro pevese vanokwanisa kuonekwa nomurume wako.
Hwisisa kuti isu vakadzi tine dambudziko rokuita sokuti hatigutsi varume vedu. Tisu tinofanira kugara dare tega tichikurukura nyaya yedu kuti iri papi. Tisu tinofanira kusunga mabhandhe towedzera zviitwa varume vamboonawo kuti tiri vanhu vanoverengwa kuti tinoda varume vedu.
Zvese izvi zvapera kutaugwa, KUNAKA kwemunhu kuri mufungwa yaNyakunakigwa, asi Nyakunaka wacho ndiye anoisa fungwa iyoyo muna Nyakunakigwa. Ukataridza kuti unoda kunakira umwe wako, anonakigwa.
Murume tora nguva uri mukati, chemererawo, taura mashoko muzheve yomukadzi, udza mukadzi zvokuita, bvuma kuti ari kuita zvakanaka zvinonaka. Terera zviri kubva kumukadzi. Koira zvine RHYTHM zvisiri zvekumhanyamhanya. Garotaridza rudo pamukadzi, uchimubababata pese paunokwanisa. Ziva kuti muviri wese wemukadzi unonaka kubatwabatwa nomurume wake, kwete kungomhanyira pamberi chite.
Mukadzi ita Attitude yekuriritira murume pane zvese zvaanoda kuti uite. Zvipe kumurume wako nomoyo wose. Purakitiza kushandisa chiuno chako. Shamwaridzana nechombo chomurume wako, wochigezesa, wochipukuta, wochitambisa, wotaura nacho, woita close relationship nacho. chemerera, kuza murume, Bvuma kuti ari kukurhoja zvakanaka. Mapedza mupe SUMMARY yezvaaita nokuti wanakigwa. Kana uchisvoda kuudza murume kuti anonaka chose, enda unotenga bhuku rako rakahi DIARY ugonyora zvese zvaanokuita nezvaunoda kumuita zuva nezuva ugosiya pachena. Hakuna munhu ane musikana/mukomana/mukadzi/murume, anokwanisa kuona DIARY yake agokwanisa kusariverenga. Hazviiti. Nyora zvese zvaanokuitira murume wako. Nyora kunaka kwake uye kuti unoziva kuti wakasarudza zvakanaka, uye kuti chero chaakukumbira uchamuitira chete. Uchaona kuti murume anoita zvido zvako zvaunonyora achiverenga usipo.
Ukaverenga tsamba dzevarume vakawanda vanonyora, unohwa vachikomburena nenyaya yokuti mukadzi anongoiswa asingafakanyiki kusvika murume apedza. Munhu hwisisa kuti murume pamwe haakuudzi hake asi haasi kufara nezviito zvako panyaya iyi. Ko chinokutadzisawo kungogamuchira murume wako pazvinhu zvamunoita mese chii? Chiuno unacho purakitiza wega.
Tenderedza fungwa dzemurume wako azive kuti mumba mune zvese zvaanoda, zvaachada, zvaanofunga kuda, zvaanohwisisa nezvaasingahwisisi kuti anozvidirei. Mukadzi ane murume anofanira kugara ari mberi kwemurume pakufunga zvinokwanisa kunaka kusvika pakuhi anonaka zviri pamusoro.
Varume ingotiwedzeraiwo nguva yokubva pakupinza kusvika pakudiridzira urume. Zvimwe zvese tinoita tega. Nguva chete veduwee, nguva. Ukaona uchitangira mukadzi ziva kuti nguva yauri kumupa ishoma. wana mukana wekuwedzera nguva iyi. Zvinoda kudzidzwa asi munhu waunotodzira paari ndiye mukadzi wako iyeye, uchipota uchibvunza kuti zvange zvichinaka here uye asvika papi, zvoitwa sei kuti awedzere kunakigwa.
Bhinzi ndiyo headquarters yekunakigwa kwemukadzi asi ndinowana tsamba dzakawandisa kubva kuvarume vanobvunza kuti bhinzi iri papi asi ipapo agara nomukadzi makore. Ko kubvunza mukadzi wako kuti bhinzi yake iripi zvinogozha pakudii pamunhu waunofongoresa uchimupinza chombo? Shamwaridzana nebhinzi yomukadzi wako uipe zita raunogarbvunza mukadzi kuti Matilda ari sei nhasi. Amuka here kana kuti ari kuda kumutsvwa here. Unona mukadzi onyemwerera nokuziva kuti wafunga bhinzi yake.
Verenga pakahi Chikapa.
Ndingaziva sei kuti ndinonaka
Murume anokwanisa kuziva kuti anonaka kana muzviito zvake panyaya yokurhojana mumba mavo mune izvi nguva zhinji:
Kugara une utsanana pamuviri wako, kugeza muviri, kugeza chombo zvakanaka kusvika pakufunyungura ganda wogeza nesipo chimusoro chechombo posaita gweme, kugeza hapwa, kugeza mazino usati wandovata nomukadzi. Utsanana chinhu chikuru chose kuvanhukadzi.
Kutaridza rudo kumukadzi wake nguva zhinji uye kuudza mukadzi nyaya dzerudo
Kuzivisa mukadzi wake kuti iye anoda kurhoja mukadzi zvikuru uye anonakigwa nazvo.
Kuudza mukadzi maitire aanoda uye kuti mukadzi anofanira kuit ei kuti iye anakigwe.
Kumirira mukadzi kuti anyorove asati apinza chombo
Kuziva nhengo dzemuviri wemukadzi dzinonakira mukadzi kana murume achidzibata nokudzikisa kana kunanzva, dzakaita se magaro, mazamu, kumeso, zvidya, matinji, dumbu, kuseri kwemabvi, muromo.
Kukumbira mukadzi PERMISSION yokupinza kana waziva kuti mukadzi anyorova.
Kuziva nguva inoda mukadzi kurhojewa zvine simba uye kurhojewa zvekunyemudza , zvichibva nokuti mukadzi ane zemo rakaita sei. Pane nguva inoti munhukadzi anoda kurhojewa zvine simba uye zvinomukasirisa kubva zemo.
Kuhwisisa kuti nguva yechombo mukati memukadzi ngaive refu chose kana pasina chamuri kumhanyira. Pfuura maminitsi gumi uchikoira mukadzi wako . Kumirira mukadzi apedze murume asati adiridzira. Kuti paya mukadzi atanga kuita ORGasm asi asati aipedza murume owedzera kukoira odiridzira mukadzi ari pakati pezvake. Zvinonaka zvokuti.
Kukoira zvakasiyanasiyana, kukurungira, kuisa simba, kukoira zvinyoro, kukoira zvakadzika, kukoira pedopedo pemuromo wechitubu. Zvese izvi muRhoji imwe chete.
Kuwana nguva yokutaura nomukadzi mapedza, makambundikirana musati mabatwa nehope, wommudza kuti unomuda uye kuti anonaka.
Kuti mukadzi azive kuti anonaka pane zvakawanda zvaanofanira kuziva kuti ari kuita mumba make.
Kuva noutsanana pamuviri wake zvoreva kuti anogarogeza zvakanaka nokushandisawo zvinonhuwira kuti muviri wake usaita hwema hwakaipa. Kugeza pamberi zvakanaka, zvikuru pakapoteredza bhinzi panokwanisa kuita gweme, zvikuru kana ganda rakafukidza bhinzi riri hombe. Geza ne vinegar kamwe pavhiki kuti usaita hwema. Kugeza hapwa, kusaita vhudzi rine hwema. Utsanana pamukadzi chinhu chikuru chose.
Kuda murume wake uye kuratidza kuda murume nguva zhinji.
Kuratidza kufarira chombo chomurume. Varume vanoita COMPLEX pachombo saka ukarerusa hana yomurume pachombo chake zvinobatsira.
Kuudza murume kana une zemo.
Kufarira kutamba nechombo, kuchipurudzira, kuchibatabata, kuvhura zipi nokuchibudisa mubhurugwa remurume.
Kuudza murume kana wanyorova woda kupinzwa chombo.
Kuudza murume maitire auri kuda kana kubvunza murume kuti ari kuda maitire api. Kuita zvaataura.
Kuchemerera, kubatirira, kudembademba zvinoratidza kuti uri kuhwa mafambire echombo mukati mako.
Kushandisa chiuno ( chikapa) zvinotaridza kuti uri kunakigwa nechombo, uye kutungamirira murume pasipidhi yaunoda.
Kushinya chombo nemasuru yechitubu kuti chombo chese chihwe kukwizirigwa pakupinda nokubuda.
Kubata murume kuti kwii nokumusunga nemakumbo paanotanga kudiridzira kuti asiye zvese mukati mechitubu, kukama chombo nemasuru yechitubu paanodiridzira.
Kuudza murume manakire azvaita nokutenda kuti anoda kukurhoja uye kuti asiira papi kuti kana moitazve azive zvokuiwedzera.
Utsanana pamuri mese chinhu chikuru pakunakigwa. Vakadzi vakawanda vanokomburena kuti varume vavo havadi kugeza, zvinova zvinoderedza kuda kukisana navo. Gezai mazino.
Varumewo vanokomburena kuti pamberi pemukadzi pane hwema. Hwema hunoitiswa nemaBACTERIA. Anourawa neVINEGAR asi mukati mechitubu hamuiti hwema kana musina chigwere. Munongoita hwemakadzi chete hunova hunoitisa varume zemo. Usaisa chinhu mukati mechitubu nokuti unokanganisa BALANCE irimo. Chombo chete ndicho chinopindamo uye ma Tampon kana uri kumwedzi.
kugona kubata murume pabonde
Posted by Mai E Chibwe at 14:02
ndinobata bata murume sei uye pai? kana ari pamsoro pangu anonditsikirira ndinozosimuka sei ndichitambisa chiuno?
Murume ane zviri pamuviri wake zvokuti ukazvibatabata kana kuzvipurudzira chombo chake chinowedzera kumira. Unokwanisa kunanzva minyatso yake sezvaanoita yako kana kutoimwa sezvaanoita yako. Unokwanisa mumbotamba nechombo chake nemaoko.
Kana ari pamusoro anenge akazvisapota nemaoko ake akaisa magokora pasi, uku zasi akaisa mabvi ake pasi, kuti asakutsimbirira zvokutadza kushandia chiuno. Zvadaro iwe shandisa chiuno sezvandakataura uchaona kuti iye ega annofunga kuti wakamupa mufuhwira.
13 October 2012 at 10:48
Kudzidza hakuperi. Maita henyu mai chibwe
21 October 2016 at 06:37
21 October 2016 at 06:38
21 October 2016 at 06:39